1. Imigomo Nemibandela
Ngokungena kuwebhusayithi ku-https://www.theholyapostles.com, uyavuma ukuboshwa yile migomo yesevisi, yonke imithetho nezimiso ezisebenzayo, futhi uyavuma ukuthi unesibopho sokuhambisana nanoma yimiphi imithetho yendawo esebenzayo. Uma ungavumelani nanoma iyiphi yale migomo, uvunyelwe ukusebenzisa noma ukufinyelela leli sayithi. Izinto eziqukethwe kule webhusayithi zivikelwe umthetho osebenzayo we-copyright nophawu lwentengiso.
Imvume inikezwa ukulanda okwesikhashana ikhophi eyodwa yezinto (imininingwane noma isoftware) kuwebhusayithi yeThe Holy Apostles 'yokubuka okwakho okungahambisani nokuhweba kuphela. Lesi yisibonelelo selayisense, hhayi ukudluliswa kwetayitela, futhi ngaphansi kwale layisensi, awungeke:
sebenzisa okokusebenza nganoma iyiphi injongo yezentengiso, noma kunoma isiphi isibonisi somphakathi (ezentengiso noma okungezona ezentengiso);
ukuzama ukubola noma ukuguqula unjiniyela noma iyiphi isoftware equkethwe kuwebhusayithi yabaThe Holy Apostles;
dlulisela izinto zomuntu omunye umuntu noma "isibuko" izinto ezikunoma iyiphi enye iseva.
Le layisensi izonqanyulwa ngokuzenzekelayo uma wephula noma iyiphi yale mikhawulo futhi ingaqedwa ngabaPhostoli abaNgcwele nganoma yisiphi isikhathi. Lapho umisa ukubuka kwakho kwalezi zinto noma ukunqanyulwa kwale layisensi, kufanele uchithe noma yiziphi izinto ezilandiwe onazo noma ngabe zisefomethi kagesi noma ephrintiwe.
Izinto ezisetshenziswayo ezikule webhusayithi yabaPhostoli abaNgcwele zinikezwa ngesisekelo se-as-as. AbaPhostoli abaNgcwele abazenzi iziqinisekiso, ezivezwayo noma ezisikiselwayo, futhi ngalokhu bayazilahla futhi baziphikise zonke ezinye iziqinisekiso ezibandakanya, ngaphandle komkhawulo, amawaranti asikiselwe noma imibandela yokuthengiseka, ukufaneleka ngenhloso ethile, noma ukungaphuli umthetho wobuhlakani noma okunye ukwephulwa kwamalungelo.
Ngaphezu kwalokho, abaPhostoli Abangcwele abagunyazi noma abenzi izethulo maqondana nokunemba, imiphumela engaba khona, noma ukwethembeka kokusetshenziswa kwezinto ezisetshenziswa kwiwebhusayithi yayo noma ezihlobene nokunye okunjalo noma kunoma yiziphi izingosi ezixhunywe kule sayithi.
Akunakwenzeka ukuthi abaPhostoli abaNgcwele noma abahlinzeki bayo bathwale icala ngokulimala (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, umonakalo wokulahleka kwedatha noma inzuzo, noma ngenxa yokuphazamiseka kwebhizinisi) okuvela ekusetshenzisweni noma ukungakwazi ukusebenzisa izinto ezikwiThe Holy Apostles 'iwebhusayithi, noma ngabe abaPhostoli abaNgcwele noma AbaPhostoli Abangcwele abagunyaziwe abamele bazisiwe ngomlomo noma ngencwadi ukuthi kungenzeka umonakalo onjalo. Ngoba ezinye iziphathimandla azikuvumeli ukulinganiselwa kumawaranti ashiwo, noma imikhawulo yesikweletu ngokulimala okulandelanayo noma okungahle kwenzeke, le mikhawulo ingahle ingasebenzi kuwe.
Izinto ezivela kuAbaPhostoli abaNgcwele'iwebhusayithi ingafaka amaphutha obuchwepheshe, wokushicilela, noma wezithombe. AbaPhostoli abaNgcwele abagunyazi ukuthi noma yiziphi izinto ezisetshenziswayo kuwebhusayithi yazo zinembile, ziphelele noma zikhona manje. AbaPhostoli abaNgcwele bangenza izinguquko ezintweni eziqukethwe kwiwebhusayithi yayo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Kodwa-ke, abaPhostoli abaNgcwele abazibophezeli ekuvuseleleni izinto.
Izixhumanisi ezansi kwamakhasi ziyizixhumanisi ezisetshenziselwa ucwaningo futhi zibekwe njengesethenjwa.
7. Izixhumanisi Zokuxhumana
AbaPhostoli abaNgcwele babeka izixhumanisi ezihambisanayo kuwebhusayithi futhi kokuthunyelwe ngakunye kushiwo ukuthi lokho okuthunyelwe kunesixhumanisi sokuxhumana. AbaPhostoli abaNgcwele bathola iphesenti elincane uma kwenzeka isivakashi siwuthenga umkhiqizo kodwa abasoze bavumela isivakashi ukuthi siwuthenge.
AbaPhostoli abaNgcwele bangabuyekeza le migomo yokusebenza yewebhusayithi yayo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuthi uzoboshwa yinguqulo yamanje yale migomo yesevisi.
Le migomo nemibandela ilawulwa futhi yaqondiswa ngokuya ngemithetho yase-Hampshire futhi uhambisa ngokungenakuphikiswa kumandla kuphela ezinkantolo ezikuleso Sifundazwe noma kuleyo ndawo.
Imibandela Yokusebenzisa eyenziwe ngeI-GetTerms.